October 2018 | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
ग्यास बुलेटमा अझै अन्योल छ अर्बको लगानी फ्रिज
10/31/2018 12:19:00 PM समाचार
काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने नेपाली ग्यास बुलेट भारतबाट ल्याउने प्रक्रिया प्रभावकारी नहँुदा व्यवसायी अन्योलमा छन् । बुलेट कहिले आउने हो अझै टुङ्गो छैन । तीन वर्षदेखि भारतमा निर्माण भएका नेपाली ग्यास बुलेट उतै रोकिएका छन् । भारतले एक महिनाअघि ५३ वटा ग्यास बुलेटलाई ढुवानी अनुमति दिई सञ्चालन गर्न दिने सहमति गरे पनि अझै प्रक्रिया शुरू भएको छैन ।
हाल तयार भइसकेका ५३ वटा बुलेट सञ्चालन गर्न दिने सहमति असोज १२ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान सहितको काठमाडौँमा बसेको संयुक्त कार्यदलको बैठकमा भएको थियो तर सहमति भएको एक महिना पुग्दा पनि आपूर्ति मन्त्रालय कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरामा अनुत्तरित छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भन्नुभयो, ग्यास ढुवानी गर्ने सर्टिफिकेट लिने प्रक्रिया अघि बढ्छ, प्रक्रिया अघि बढेको छ, भारतको कानुन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ, भारतको टर्मिनलसम्म गएर ग्यास भर्न दिने सहमति भएको हो, हामी फलो गरिरहेका छौँ । उहाँका अनुसार नेपाल आयल निगम पनि सो काममा लागिरहेको छ ।
तत्कालीन सरकारले राजस्वमा भारी छुट दिएपछि नेपाली व्यवसायीले भारतबाट ७७५ वटा ग्यास बुलेट खरिद गरेका थिए । भारतको एक्स्प्लोसिभ डिपार्टमेन्टले विस्फोटक पदार्थ बोक्ने एक्स्प्लोसिभ इजाजत अनुमतिपत्र नदिएपछि तीन वर्षदेखि नेपाली बुलेट रोकिएका थिए । ७७५ वटा बुलेट खरिद गरिएकामा तत्कालका लागि जम्मा ५३ वटालाई मात्र अनुमति दिने सहमति भएको थियो ।
व्यवसायीले भने ग्यास बुलेट ल्याउन नसक्दा आफूहरूको लगानी फ्रिज भइरहेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले बेलैमा पहल नगर्दा वर्षौंसम्म बुलेट आउन नसकेको एलपी ग्यास सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी भन्नुहुन्छ, सहमति भइसकेपछि पनि आपूर्ति मन्त्रलायले प्रभावकारी पहल गरेको हामीले पाएका छैनौँ, हामी चाहन्छौ सहमति पश्चात छिटो काम होस् तर हुन सकेको छैन ।
अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार भारतमा १० वर्ष पुराना ग्यास बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्न नपाइने नयाँ कानुन आएको छ ।
भण्डारी भन्नुहुन्छ, हाम्रा ग्यास बुलेट दुई वर्षभन्दा बढी भइसके कहिले आउने हो कतिवर्ष काम गर्न पाउने हो ? सङ्घका अनुसार भारतको बरौनीदेखि काठमाडौँसम्मको ग्यास ढुवानी गर्दा प्रतिसिलिन्डर ८७ रुपियाँ दिइन्छ । एउटा ग्याँस बुलेटबाट १२ सय ५० वटा सिलिन्डिर भरिन्छ ।
बुलेट रोकिँदा छ अर्ब रुपियाँको लगानी फ्रिज भइरहेको भण्डारीले बताउनुभयो । भारतीय एक्स्प्लोसिभ विभागले एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउँदा बुलेट रोकिएका छन् । नेपालमा ग्यास ढुवानीका लागि २०७२ असोजदेखि नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बुलेट किन्ने प्रक्रिया शुरू भएको थियो ।
नेपाली ग्यास बुलेट ल्याउन केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजस्वमा दुई तिहाई छुट दिएपछि व्यवसायीले बुलेटमा लगानी गरेका थिए । नेपालमा मासिक ४० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ ।
- लक्ष्मण दर्नाल , गोरखापत्र दैनिकबाट
10/31/2018 12:13:00 PM आर्थिक
10/31/2018 12:11:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य : उल्लेख्य सुधार, ब्रेकफास्ट लिए
10/30/2018 04:23:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पतालले १० बजे विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको जानकारी दिएको हो।
'आज बिहान गरिएको रगत परिक्षण र एक्स रे रिपोर्टहरु सकारात्मक रहेको र स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको छ' अस्पतालका निर्देशक डा उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनको उपचारमा संलग्न डा. अरुण सायमीले प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान सजिलैसँग ब्रेकफास्ट खाएको र दाह्री काटेको समेत जानकारी दिए।
उनको उपचारमा डा सायमीको संयोजकत्वमा डा‍. दिव्या सिंह र डा. सन्तकुमार दास संलग्न छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहान ४:३० बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो।
दसैंमा टीका लगाउने क्रममा धेरै जनासँग सम्पर्कमा आएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुघाखोकी सरेको
चिकित्सकहरुले अनुमान गरेका छन्।
10/30/2018 04:13:00 PM आर्थिक
10/30/2018 04:11:00 PM स्वास्थ्य
काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । शिशु जन्मेको छ महीना पुग्यो ? अथवा पाँच वर्षमुनिको छ ? छ भने भोलि पायक पर्ने ‘बुथ’मा लिएर जाने तयारी गर्नुहोला ।
मतदान गर्न होइन नि बुथमा ! आफ्ना शिशुलाई स्वस्थ बनाउन एकैपटक चार सेवा भिटामिन ए, जुकाको औषधि (अल्वेन्डाजोल), पाखुराको नाप र बालभिटा प्राप्त गर्न । यसका लागि देशभर ३६ हजार बुथमा ६० हजार स्वयम्सेविका÷स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।
कात्तिक १४ र १५ गरी दुईदिन भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)लगायत बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमभित्र सो कार्यक्रम पनि रहेको छ । मन्त्रालयले एक वर्षमा वैशाख ६ र ७ तथा कात्तिक २ र ३ गते सो कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने गर्दछ । यस वर्ष महान् पर्व बडादशैँ परेकाले मन्त्रालयले कात्तिक १४ र १५ गते सो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । पहिलोचोटि यस पटक ती कार्यक्रमको नेतृत्व पालिका (गाउँपालिका÷नगरपालिका)ले गर्दैछन् । “देशभरका ७५३ पालिकामार्फत् ती चारवटै सेवा प्रदान गर्न सबै तयारी पूरा भयो”, बालस्वास्थ्य शाखाअन्तर्गतका पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुली भन्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार भिटामिन ए क्याप्सुल छ महीनादेखि पाँच वर्षमुनिका करीब २७ लाख तथा एक वर्षदेखि पाँच वर्षमुनिका २३ लाख ५६ हजार ८५३ बालबालिकालाई अल्वेन्डाजोल एक ट्याबलेट खुवाइनेछ । अल्वेन्डाजोल चकलेट स्वादमा रहेको छ ।
“भिटामिन ए ले बालबालिकालाई रतन्धो हुनबाट जोगाउँछ, रोगसित लड्ने क्षमतामा वृद्धि हुँदा उनीहरुलाई झाडापखाला, श्वास प्रश्वासलगायतका सङ्क्रमणबाट जोगाउँछ”, बाल स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा झलक गौतम बताउनुहुन्छ । भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रम शुरु भएको लामो समय बितिसके पनि अझै चार प्रतिशत बालबालिकामा भिटामिन ए अभावको समस्या रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । यसैगरी बालबालिकाका लागि अति आवश्यक सुक्ष्म पोषक तत्वका रुपमा बालभिटा खुवाइदैछ । सन् २००८ देखि छ महीनादेखि दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई बालभिटा खुवाउन शुरुआत गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले छ महीनादेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पाखुराको नाप लिन अनिवार्य गरेको छ । “पाखुराको नापले बालालिकाको पोषणको स्थितिलाई देखाउँछ । नापले रातो, पहेँलो र हरियो अवस्था देखिन्छ । रातोले कडा कुपोषित, पहेँलोेले मध्यम र हरियोले कुपोषित अवस्था देखाउँछ”, पोषणशाखा प्रमुख पराजुली भन्नुहुन्छ । कुपोषित देखिएका बालबालिकाका अभिभावकलाई पोषण खानाको महत्व, स्थानीय तहमा अन्न तथा फलफूलमा पाइने पोषणका बारेमा जानकारी एवं लिटोका लागि पीठोसमेत वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा गौतमका अनुसार यस पटक ती कार्यक्रमका लागि ३६ हजार बुथ रहने छन् । ती बुथमा ६० हजार स्वास्थ्यका जनशक्ति परिचालन हुने छन् । पहिलो दिनमा स्वयम्सेविका÷स्वास्थ्यकर्मीले बुथमा आएका बालबालिकालाई ती सेवा प्रदान गर्नेछन् । पहिलो दिनमा छुटेका बालबालिकालाई स्वयम्सेविकाले दोस्रो दिन घर घरमा गई ती सेवा प्रदान गर्ने छन् । महिला स्वयम्सेवी तथा । - रासस
सुन्धारास्थित धरहराको नवनिर्माण सुरु
10/30/2018 04:08:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक सम्पदा धरहराको नवनिर्माण सुरु भएको छ । तीन वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ भन्ने नाराका साथ धरहरा बनाउने अठोट गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण कार्यको औपचारिक सुरुवात भने केही दिनपछि हुनेछ । तीन वर्षअघि २०७२ बैशाख १२ गते आएको भूकम्पमा धरहरा पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले धरहराको नवनिर्माण सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । धरहरा निर्माणको क्रममा अहिले स्थलगत सरसफाइ तथा ‘साइट क्लियरेन्स’ को काम भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । धरहराको नवनिर्माण रमण र जेडआईईसीले संयुक्त रूपमा गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका सम्पदा संरक्षण महाशाखाका प्रमुख राजुमान मानन्धरले बहुप्रतीक्षित धरहरा नवनिर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्दै त्यसको औपचारिक शिलान्यासको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
तिहारअघि नै शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको समयका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणका अनुसार कुल ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने धरहरा अबको दुई वर्षभित्र निर्माण भइसक्ने छ । नयाँ डिजाइनअनुसार धरहराको लागत तीन अर्ब ४८ करोड रुपियाँ हुनेछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव समेत रहनुभएका मानन्धरले भन्नुभयो, “धरहरा रहेको काठमाडौँ वडा नं. २२ का स्थानीयबासीको अवरोधका कारण केही समय धरहरा नवनिर्माण ढिलाइ भएकोमा अहिले स्थानीयबासीसँग सहमति भइ निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ ।”
सुन्धारालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, वडाबासीलाई सहज र सुलभ रुपमा नवनिर्मित धरहरा परिसरमा प्रवेश हुनुपर्ने, सांस्कृतिक धरोहरको रुपमा ‘टक्सार’ भित्र रहेका सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका सामग्रीहरुलाई सङ्ग्रहालयको रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अहिले बन्द गरिएको टक्सारको बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतको विषयमा वडाबासीसँग सहमति भइसकेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुन्धारा परिसरमा रहेका टक्सार पनि हस्ताणतरण गरिने बताउँदै उहाँले इतिहासलाई जीवन्त राख्ने उद्देश्यसहित अहिले टक्सार कार्यालयमा रहेका पुराना मेसिन, मुद्रा लगायतका ऐतिहासिक वस्तुहरुको सङग्रहालय समेत निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । टक्सारलाई बबरमहलमा स्थान्तरण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सहमतिबारे वडाबासीलाई लिखित जानकारी गराइसकिएको छ । टक्सारभित्र मानन्धर समुदायको कुलदेवता रहेको स्थानीयको विश्वास छ । धरहराको निर्माण भइसकेपछि यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
निर्माणाधिन धरहरा परिसरभित्र जमिनमूनि टेलिफोन, विद्युत, खानेपानीको पाइप तथा तारहरू रहेकाले निर्माण कार्यलाई अति सावधानीका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले ती तार र पाइपलाई सार्ने बन्दोबस्त भइरहेको जानकारी दिनुभयो । पाइप र तारकै कारण अहिले विस्तारै काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । धरहरा परिसरभित्र जमिनमूनि टेलिफोनका २२ हजार तार विछ्याइएको छ ।
सुन्धारालाई पुनः सञ्चालनमा आउने
सहसचिव मानन्धरका अनुसार धरहरा निर्माणको क्रममा केही वर्षदेखि बन्द रहेको सुन्धारालाई सञ्चालनमा ल्याइने छ । सुन्धारामा पानीको बहावलाई सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै अहिले बन्द रहेको सुन्धाराको पानीको निकासलाई समेत सुचारु गरिनेछ । सुन्धाराको पानीलाई ताहागली–भोटेबहाल हुँदै टुँडिखेलमा खसाल्ने योजना रहेको छ । अहिलेको सुन्धारामा केही पनि परिवर्तन नगरिने तथा पुरातात्विक महत्वलाई ध्यान दिंदै त्यसको मर्मत सम्भार मात्र गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
धरहाराको ठूटो संरक्षण
इतिहासलाई जोगाउने उद्देश्यसहित धरहराको नवनिर्माणसँगै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अहिलेको धरहराको ठूटोलाई संरक्षण गरिने जानकारी सहसचिव मानन्धरले दिनुभयो । धरहराको अहिलेको टुक्रालाई शिशाले छोपेर जस्ताको त्यस्तै राखिने उहाँले बताउनुभयो । नयाँ धरहारा हेर्नले पुरानो धरहराको समेत अवलोकन गर्ने छन् ।
हुलाक कार्यालय पनि सारिने
धरहरा निर्माणका लागि गोश्वरा हुलाकको भवन भत्काइने छ । हुलाक भवन भत्काउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताउँदै प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरले हुलाक कार्यालयलाई तत्कालका लागि बबरमहलस्थित अस्थायी घरमा सारिने जानकारी दिनुभयो ।
अबको दुई महिनाभित्र बबरमहलमा हुलाक कार्यालयका लागि अस्थायी भवन निर्माण हुनेछ । त्यसपछि डिल्लीबजारमा निर्माणाधिन आफ्नै भवनमा स्थान्तरण गरिनेछ । सरकारले हुलाक कार्यालय निर्माणका लागि डिल्लीबजार चारखालमा १५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
धरहरा निर्माण कोषमा नौ करोड
प्राधिकरणका अनुसार अहिले धरहरा निर्माण कोषमा नौ करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानको घोषणासँगै खडा गरिएको कोषमा आफ्नो एक महिनाको तलब राखेर खाता खोल्नुभएको थियो ।
नयाँ धरहरा निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तथा ‘डिजाइन’ को काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिंदै महाशाखा प्रमुख मानन्धरले नवनिर्मित धरहरा जमीनमूनि दुई र जमिनमाथि २२ तल्ला गरी जम्मा २४ तल्लाको हुने बताउनुभयो । धरहराको डिजाइन केज कन्सुलेट प्रालि र एमआरबी एण्ड एशोसिएट्सले तयार पारेको हो ।
धरहरामा चढ्ने र ओर्लिने गरी दुईतर्फी लिफ्ट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । नयाँ बन्ने धरहरा अपाङ्गमैत्री समेत हुनेछ । धरहराको १८औंं तलामा १७ जना क्षमताको मिनी थिएटर बनाइने छ जहाँ धरहराको विगतदेखि वर्तमानसम्मको भिडियो डिस्पले गरिने छ । कुल २४५ फिट अग्लो धरहराको टुप्पोमा शिशाले घेरेको ‘भ्यू डेक’ निर्माण गरिने छ जहाँबाट काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने छ ।
नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरी देवीको सम्झनामा निर्माण गरिएको धरहरा १९९० सालको भूकम्पमा केही भाग ध्वस्त भएता पनि २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो ।
नब्बे सालको भुइँचालोअघि धरहरा ११ तलाको थियो । भुइँचालोले दुई तला भत्किएपछि नौ तलामा सीमित भएको थियो । भिमसेन थापाले निर्माण गरेको धरहरा ६१.८८ मिटर अर्थात् २०३ फिट अग्लो थियो भने धरहरामा २१३ वटा सिढीं थिए । - भउचप्रसाद यादव , गोरखापत्र दैनिकबाट
देशभरी चिसो बढ्यो, काठमाडौंको तापक्रम ८ डिग्री सेल्सियस
10/28/2018 03:30:00 PM समाचार
काठमाडौं , कार्तिक ११ गते । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । दशैँअघिसम्म अधिकांश भागमा गर्मी महसुश भए पनि दशैँलगत्तै तापक्रम घटेको छ ।
आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आठ दशमलब शून्य डिग्रीमा झरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । तापक्रम घटेकाले उपत्यकामा चिसो महसुस गरिएको छ । यद्यपि दिउँसोको समयमा भने तापक्रम केही बढी छ । महाशाखाले काठमाडौँको अधिकांश तापक्रम आइतबार २५ डिग्रीसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
महाशाखाका अनुसार आइतबार काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम आठ दशमलब शून्य र अधिकतम तापक्रम २५ दशमलब पाँच डिग्री छ । आइतबार सबैभन्दा कम जुम्लामा न्यूनतम तापक्रम शून्य दशमलब सात डिग्री र सबैभन्दा बढी विराटनगरमा १८ दशमलब शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम ३२ दशमलब पाँच डिग्री सेल्सियस छ । - अनलाइन खबरबाट
10/28/2018 03:25:00 PM खेलकुद
पत्नी हत्यापछि फरार युवक पोखरामा पक्राउ
10/28/2018 03:21:00 PM अपराध
काठमाडौं , कार्तिक ११ गते । आफ्नै पत्नी हत्या गरी फरार रहेका युवकलाई प्रहरीले पोखराबाट पक्राउ गरेको छ ।
पत्नी लक्ष्मी परियारको हत्या गरी फरार रहेका खोटाङ बराहपोखरी गाउँपालिका ६ मौवाबोटेका २२ वर्षका अनिल परियारलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पोखरा महानगरपालिका ७ माछापुच्छ्रे टोलबाट पक्राउ गरेको हो ।
गत भदौ १२ गते काठमाडौंको बसुन्धराको स्पीड गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर १०१ मा बस्ने परियारले पत्नी १८ वर्षकी लक्ष्मी परियारको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीका अनुसार उनले पत्नीको हत्यामा आफ्नो संलग्नता पनि स्वीकार गरेका छन् । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका ७ घर भइ हाल बोहराटार बस्ने लक्ष्मीको शव भदौ १५ गते भेटिएको थियो ।
10/28/2018 03:10:00 PM स्वास्थ्य
हामीले जाडो महिनाामा धेरै ग्लिसिरिन को प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। त्यो राम्रो पनि हो ग्लिसिरिनको प्रयोग गर्दा हामीले ग्लीसिरिन मात्र प्रयोग गर्नुहुदैँन किनभने ग्लिसिरिनमा पानी सोस्ने शक्ति हुन्छ र ग्लिसिरिनको मात्र प्रयोग गर्नाले शरीरमा भएको चिल्लो पदार्थलाई सोचेर छाला झन् सुख्खा बनाउने गर्दछ, त्यसैले ग्लिसिरिन को प्रयोग गर्दा जहिले पनि एक चम्चा ग्लिसिरिन मा दुईचम्चा पानी वा रोज वटर वा कागती मिसायर प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ।
जाडोमा खुट्टा फुटेर हैरान भइन्छ, त्यो बेलामा खुट्टा फुट्ने समस्या भएकाहरुले खुट्टालाई बनाएको क्रिम लगाउनुपर्छ । त्यसमा धेरै मोसचराइज केमिकल हालेर बनाइएकोले फुटेको खुट्टा छिटो निको हुन मद्दत गर्छ।
जाडोमा हामीले नुहाउँदा तातो पानीको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ तर धेरै तातो पानीको प्रयोग गर्दा शरीर सुख्खा हुन्छ। जाडोमा नुहाँउदा जहिले पनि मनततो पानीले नुहाउने र नुहाउनासाथ अलिअलि पानी पुछेर मोस्चराइज लोसनको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नाले शरीरको चिल्लो कम हुन पाउदैन।
- डा सविना भट्टराई, वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
प्रधानमन्त्री ओलीलाई छातीको संक्रमण बढ्ने खतरा, आराम गर्न चिकित्सकको सुझाव
10/28/2018 02:56:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौं, कार्तिक ११ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका छन्। रुघाखोकीले सताएपछि उनी शनिबार आयोजित नेकपाको चियापान कार्यक्रममा जान सकेनन्।
संक्रमण बढ्ने सम्भावना भएपछि चिकित्सकले उनलाई आराम गर्न सुझाव दिएका छन्।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आएको र रुघाखोकीका कारण छातीमा संक्रमण बढ्ने खतरा देखेपछि निवासमा नै आराम गर्न चिकित्सकले सुझाएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएका डा दीलिप शर्माका अनुसार चिसो बढेसँगै रुघाखोकीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सताएको छ।
‘भिडभाड र बढी भेटघाटमा व्यस्त हुँदा संक्रमण होला भनेर आराम गर्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘एक-दुई दिन आराम गरेपछि उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ।’- स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
उपत्यकाबाट २१ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन
10/28/2018 02:48:00 PM समाचार
काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ गरी २१ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ ।
सफाइबाट छ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिकी सञ्चालक सदस्य माला खरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सफाइमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंह पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।
सफाइपछि सचिव सिंहले तिलगङ्गाबाट बुद्धनगर पुलसम्मको नदीको अनुगमन पनि गर्नुभयो । सभ्यताको स्रोत वाग्मती सफाइ गर्ने अभियानलाई मन्त्रालयले उच्च महत्व दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
मुहानदेखिकै वाग्मती सफाइ अभियानमा जुटेको वाग्मती सुन्दरता सरोकार मञ्चले २४६ औँ हप्ताको सफाइ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित हत्यामोचनघाट क्षेत्रमा गरेको छ । सफाइबाट दुई मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अभियानकर्मी देवी खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
रुद्रमती सफाइको २४० औँ हप्तामा रातोपुल–कालोपुल–सेतोपुल क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा २०० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता थियो । नदी किनारमा रोपिएका बिरुवामा पानी हाली गोडमेल र स्याहार गर्न नजिकका घरधनीलाई अनुरोध गरिएको अभियानकर्मी रोहित गिरीले बताउनुभयो ।
विष्णुमती सफाइको २१२ हप्तामा सहभागी सबै चाडबाड मनाउन उपत्यका बाहिर गएकाले सफाइ गर्न नसकिएको अभियानकर्मी रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मनोहरा सफाइको ८५ औँ हप्तामा नरेफाँट अघिको नदी किनारमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँकी उपप्रमुख सरिता दाहालसहित ११० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता रहेको संयोजक चन्द्रप्रसाद दङ्गालले जानकारी दिनुभयो ।
चक्रपथ सफाइको ८१ औँ हप्तामा नयाँ बसपार्क आकाशे पुल वरपरको क्षेत्रमा सफाइ गरियो । त्यस क्षेत्रमा सुर्ती र गुट्खा खाएर खोल सडकमा फाल्नेको सङ्ख्या बढेपछि सातवटा पसलमा बेच्न राखिएको सुर्तीजन्य पदार्थ जफत गरी फालिएको अभियानकर्मी लोकबहादुर टण्डनले सुनाउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ स्थित आलोकनगर सफाइको ८१ औँ हप्तामा त्यस क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । आलोकनगर सफाइ सकी अभियानकर्मीको समूह वाग्मती सफाइ महाभियानको सफाइमा बुद्धनगर पुगेको संयोजक प्रमिला पौडेलले बताउनुभयो ।
चक्रपथ बाफल खण्डको ६३ औँ हप्तामा स्युचाटार पुलबाट सोल्टी दोबाटोसम्म सफाइ गरी दुई मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा १७५ भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता रहेको सफाइ संयोजक ताराबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । - रासस
10/28/2018 11:54:00 AM समाचार
जुम्ला, कात्तिक ११ गते । अदानचुली गाउँपालिका–४ बिगुठी हुम्लाकी १० वर्षीया बालिका रमिला बुमी गत असोज पहिलो साता आफ्नै कोदोबारीमा लगाएको काँक्रो खान गएकी थिइन् । दुर्भाग्यवशः काँक्रो खान गएकी उनी मिनेटभरमै गोली खाएर फर्किन् । थाहा थिएन उनलाई, कोदोबारीमा पुग्दा त्यो घटना घट्छ भन्ने । दिदी सुस्मिता बुमीसँगै कोदोबारीमा काँक्रो लिन जाँदा उनी गोलीको पासोमा परेकी हुन् । कोदोबारीमा छिमेकीले स्याल फसाउनका लागि भनेर थापेको जर्जन पड्कँदा (चलाउँदा बन्दुक पड्केर कुनै पनि प्राणीलाई गोली लाग्ने गरी थापिएको पासो) रमिलाको दाँया घुँडाको मुनि तिघ्रामा लागेर हड्डी र नसा छिनाल्यो ।
“ब्वाङ्ग आवाज आउने बित्तकै ढलेँछु”, त्यो क्षणलाई सम्झँदै उनले भनिन्, “उठ्न खोज्दा खुट्टा टेक्न सकिएन ।” छाम्दा हड्डी भाँचिएको र मासुसमेत भ्वाङ परेको देखेर बेहोस भएको तीतो अनुभव बुमीले सुनाइन् । त्यो दुर्घटनामा परेकी उनलाई त्यहाँ उपचारको कुनै विकल्प थिएन । तत्काल रु तीन लाख ५० हजारमा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर सुर्खेत पुरयाइएको रमिलाका मामा ज्योति गिरीले बताउनुभयो ।
लखनउमा खुट्टाको शल्यक्रिया गरेकी बुमीको यतिबेला भने डरेसिङ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा भइहेको छ । रमिला बुमीलाई छिमेकीको कमजोरीका कारण अपाङ्ग भएर अब सधैं का लागि वैशाखीको सहारामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
सानो गल्तीले गर्दा आज रमिला सधैँभरिका लागि अपाङ्ग भएकी छन् । त्यही घटनालाई लिएर आमा पवित्रा र बुबा जनक बुमीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा आफ्ना छिमेकी विरुद्ध जाहेरी निवेदन हालेको गिरीले बताउनुभयो । अञ्जानवशः ठूलो भूल भएको भन्दै छिमेकीले क्षमायाचना गरेको र रमिलाको जीवनभर स्वास्थ्य अवस्थामा आउने समस्या तथा अहिलेसम्म भएको सबै उपचार खर्च तिर्न छिमेकी मञ्जुर भएकाले कानूनी प्रक्रियाभन्दा मेलमिलाप गर्ने शर्तमा अघि बढ्ने सङ्केत उनका मामा, आमाबुबाले दिएका छन् ।
हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका स्थित जनप्रिय आधारभूत विद्यालय कक्षा ५ मा अध्ययरत रमिला कक्षाका प्रथम विद्यार्थी हुन् । उक्त विद्यालयमा मेधावी छात्राका रूपमा नाम दर्ज गरेकी उनले आफ्नो एक महीनाको पढाइ छुटेकोमा चिन्ता गरिन् । पढेर असल मान्छे बन्ने र आमाबुबाको सहयोगी बन्ने सपना लिएकी रमिलालाई अब भने उल्टै सहयोगी आवश्यक हुने भएको छ । - रासस
10/28/2018 11:43:00 AM अपराध
बाँके, कात्तिक ११ गते । रेडपाण्डाको (हाब्रे)छालासहित प्रहरीले गए राती कोहलपुर नगरपालिका–२ मुगाली बस्तीबाट सोही स्थानका ३१ वर्षीय मानबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रदेश नं ५ प्रहरी अनुसन्धान व्यूरोको टोलीका प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार दुई थान रेडपाण्डाको छालासहित शाहीलाई उनकै घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । बरामद छाला र शाहीलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा बुझाइएको छ । - रासस
10/28/2018 11:39:00 AM आर्थिक
10/28/2018 11:26:00 AM मुख्य समाचार , राजनीति
New Tihar Song 2075/2018 | Deusi Re - Santosh KC & Sharmila Gurung | Sarika KC & Ramesh KC
10/27/2018 12:04:00 PM भिडियो
New Nepali Tihar Song 2075/2018 दसैं नआउदै आउन थाले देउसी भैलो का गीतहरु
10/27/2018 11:58:00 AM भिडियो
10/27/2018 11:54:00 AM भिडियो
फूलको थुङ्गा टपक्कै टिपी (देउसी नृत्य​) 2074 | Phoolko Thunga Tapakkai Tipi | Arun Upatyaka
10/27/2018 11:50:00 AM भिडियो
10/27/2018 11:48:00 AM भिडियो
10/27/2018 11:44:00 AM भिडियो
जाडोयाममा हृदयाघातको जोखिम बढीः अध्ययन
10/27/2018 11:35:00 AM स्वास्थ्य
मौसमले विभिन्न तरिकाबाट तपाईको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ।
जाडोमा आरथाइटिस रोगीहरुलाई हावाको चाप र तापक्रम घट्नाले जोर्नीहरु दुख्ने हुन्छ । त्यसैगरी मौसम परिवर्तनले माइग्रेन भएकालाई पनि सताउने गर्दछ । हिमपातले दमका बिरामीलाई धेरै दुःख दिन्छ।
‘जमा कार्डियोलोजी’मा प्रकाशित जर्नलले अनुसार जाडो महिनामा हृदयाघातलाई महत्वपूर्ण रोगमा हेरिनुपर्ने लिस्टमा राखेको छ।
स्वेडेनको लन्ड युनिभर्सिटीका डिपार्टमेन्ट अफ कार्डियोलोजी डा. डेविड एरलिन्ज भन्छन् हृदयघात घट्दो तापक्रम, चिसो सिरेटो, मन्द वायुमण्डलीय दबाब, कम सूर्योदय अवधि आदिले बढाउने सम्भावना हुन्छ।
अध्ययनमा के भटियो भने हृदयघातको उच्च जोखिम त्यस दिन थियो जुन शुन्य डिग्री(३२ डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी सेल्सियस थियो।
तापक्रम ३ – ४ डिग्री सेल्सियस तापमान हुँदा हृदयघातको सम्भवाना घटेको पाइयो।
जब न्यूनतम तापमान ६८ डिग्री देखि ३२ डिग्री फरेनहाइटमा घट्छ त्यतिबेला हृदयघात हुने सम्भवाना १४ प्रतिशत बढेको देखिएको डा. इरलिन्ज बताउँछन्।
अध्ययनमा के पनि भेटियो भने हावाको तापक्रम ७.४ डिग्री सेल्सियसमा वृद्धि हुनुको अर्थ २.८ प्रतिशत हृदयघातको जोखिममा कमी आउनु हो।
यो नतिजा २ लाख ७४ हजार ०२९ बिरामीहरुमा गरिएको अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो।
यो अध्ययन स्वेडेस रेजिस्ट्रिीको तथ्यांकबाट अध्ययन गरिएको हो।
यो अध्ययनले हृदयघात र मौसमको सम्बन्ध देखाएको छ । जाडो मौसमममा हृदयघातबाटबच्न लाई शारीरिक क्रियाकलाप कम गर्नुका साथै घरभित्र बस्न चिकित्सक सुझाव दिन्छन्। - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
रुपन्देहीका एकै परिवारमा १२ जनाको मिर्गौला रोगबाट मृत्यु, दुईजना डाइलाइसिसमा
10/27/2018 11:28:00 AM समाचार
रुपन्देही , कार्तिक १० गते । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका बार्ड नम्बर ३ दरखसी भन्ने टोलमा रहेको उपाध्याय परिवारका १२ जनाको मिर्गौला रोगबाट मृत्यु भइसकेको छ भने तीन सदस्य मिर्गौला फेल भएपछि नियमित डायलाइसिस गरिरहेका छन्। सैनामनाको मुगियाँचोका नजिकै रहेको दरखसीटोलकी ८४ बर्षिय नन्दकला उपाध्यायको परिवारका अधिकांस पुरुषमा मिर्गाैलाको समस्या देखिएको हो।
सोही परिवारका नारायण उपाध्याय अहिले हप्ताको दुई दिन डाइलाइसि सेवा लिन बुटवलको गौतमबुद्ध अस्पतालमा आउँछन् । उनका दाइका छोरा बिष्णु उपाध्याय पनि मिर्गाैला रोगको उपचार गराइरहेका छन्। ३२ बर्षिय बिष्णुको कतारमा काम गर्दागर्दै गत साल मिर्गौलामा समस्या देखिएको हो । उनी त्यही औषधि सेवन गरिरहेको परिवारले जनाएको छ।
नारायणका दाई चिन्तामणी उपाध्ययको २०६५ सालमा मिर्गौलाको समस्याबाट मृत्यु भयो । ०६६ सालमा अर्का दाई खिमानन्द र २०७२ सालमा हरीको मृत्यु भएको थियो । नारायणले पनि २०६४ सालदेखि मिर्गाैला रोगबाट जोगिनका लागि औषधि सेवन गर्दै आएका थिए। विगत तीन वर्षदेखि भने डायलाइसिसमै जानुपर्ने अवस्था अाएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘यही रोगका कारण हाम्रो परिवारका धेरै जनाको मृत्यु भयो । उपचारका लागि भएको सम्पत्ति पनि सकियो । काम गर्न पनि सकिदैन।’
आफ्ना हजुरबुवा अग्नीधरका अधिकांस सन्तानहरुको यसैै रोगका कारण मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए। अग्नीधरका ४ छोरा हुन् । जसमा २ छोराको मिर्गाैला रोगकै कारणले मृत्यु भएको नारायण उपाध्यायले दुखेसो गरे । अग्नीधरका नातीनातीनामा अहिलेसम्म ९ जनाको मृत्यु भयो भने उता अग्निधरकै फुपु दिदिको छोरीको पनि यसै रोगका कारण मृत्यु भएको छ । हाम्रो कुलघरानमा यही रोग लागेर १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।’
यो रोग अग्नीधरका नातीनातीनामा मात्र होइन, पलातीमा पनि देखिन थालेको छ । रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेका अग्नीधरका पलाती विष्णुमा समस्या देखिसकेको छ । चेकजाँचका क्रममा डाक्टरले बंशाणुगत मिर्गौला रोग फैलिएको र ६ पुस्तासम्म देखापर्ने बताएको नारायण बताउँछन्।
पुख्र्यौली घर गुल्मी जिल्लाको अर्खबाङ्गमा पर्ने नारायण उपाध्याय सानैमा बुवासँग यहाँ आएका हुन् । उनका बुवाको मिर्गौलाकै समस्याका कारण मृत्यु भयो।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका बार्ड नम्बर ३ दरखसीबाट बुटवलका मुटु अस्पतालसम्म डायलाइसिस गर्नका लागि हप्ताको दुईपटक आउने गर्दछन् । तर रगत परिक्षण, सुई, औषधीले गर्दा ५ देखि ७ हजारसम्म खर्च हुने गरेको उनी बताउँछन्। मासिक २० देखी २५ हजार खर्च आउने गरेको उनी बताउँछन् । आम्दानीको स्रोत केही नभएका उपाध्यय परिवारले प्रत्येक बर्ष एक–एक कट्टाका दरले जग्गा बेच्दै आएका छन्।
सानो घरमा ८४ बर्षिय आमा र नारायाण दम्पत्ति मात्रै छन् । नारायणले भने, ‘९ कट्टा जग्गा थियो अहिले ३ कट्टा छ । आम्दानीको स्रोत केही छैन । प्रत्येक वर्ष जग्गाको टुक्रा बेच्दै उपचार गर्दे आएको छु।
नारायण आफू बाँचेर परिवारको हेरचाह गर्न चाहन्छन् तर प्रत्यारोपणका लागि आर्थिक अभाव रहेकाले सम्भव नभएको उनले दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘मिर्गाैला दान गर्ने व्यक्ति परिवारमै भएपनि प्रत्यारोपणका लागि खर्च जुटाउन सकिएको छैन।’
८४ बृद्धा नन्दकला सन्तानको राम्रोका लागि नियमित पूजाआजा गर्छिन् । तर, आफ्नो दुखेसो भगवानले नसुनेको उनलाई लागिरहेको छ। बृद्धावस्थामा पनि काम गरिरहेकी उनलाई आफू भन्दा पहिले सन्तानलाई यो संसारबाट बिदा गर्नुपर्दा निकै दुःख लागेको छ । उनका आफ्नै ३ छोरा र एक छोरीको यही रोगबाट मृत्यु भइसकेको छ। ‘छोराछोरी हुर्काएर बिवाह गरिदिएँ । अब सुखका दिन आए भन्ने ठानेकी थिएँ । एक–एक गरी रोगले लिएर गयो।’
५ सन्तानलाई जन्म दिएकी नन्दकलासँग अहिले कान्छा छोरा मात्रै छन्, । कान्छा छोरा नारायण पनि तीन वषदेखि डायलाइसिसको भरमा जीवन धानिरहेका छन्। - चन्द्रकान्त खनाल , स्वास्थ्य पत्रकाबाट
कञ्चनपुरका सात जना बिरामीमा डेंगु
10/27/2018 11:23:00 AM समाचार
कञ्चनपुर , कार्तिक १० गते। कञ्चनपुरमा सात जना बिरामीमा डेंगु भएको प्रमाणित भएको छ । शंकास्पद ५२ जना बिरामीको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रगत परीक्षण गर्दा सात जनामा डेंगुको भएको पाइएको हो ।
अस्पतालमा रगत परीक्षण गरिएका तीन जनामा आइजिएम र चार जनामा एनएस एक नामक डेंगुका जीवाणु फेला परेको महाकाली अञ्चल अस्पतालका ल्याव टेक्निसियन महेशदत्त जोशीले बताए। “दुई जना भारतबाट फर्केका र अन्य यही बसोवास गर्ने बासिन्दामा डेंगुका जीवाणु फेला परेको पाइएको छ” , उनले भने।
एडिज एजिप्टी जातको पोथी लामखुट्टेले टोक्दा डेंगु हुने गर्दछ । दिउँसोको समयमा सक्रिय हुने यस जातको पोथी लामखुट्टेले टोकेमा डेंगु हुने गरेको टेक्निसियन जोशीले बताउनुभयो । लाखमुट्टेले घरमा रहेका कुलर, टायर, गमलालगायतको सफा पानीमा लार्भा उत्पादन गर्ने गर्दछ ।
कुलर, टायर, गमलालगायतको सफा पानीमा लामखुट्टेले लार्भा उत्पादन गर्ने भएकाले त्यसलाई नष्ट गर्नका लागि बिषादी छर्कने र पानी सफा गर्नुपर्दछ । विगतमा जनस्वास्थ्य कार्यालयले डेंगुबारे सचेतना फैलाउने र डेंगुका लार्भा देखिएका ठाउँमा बिषादी छर्कने कार्य गर्दै आएको थियो । कार्यालय समायोजनको कार्यसँगै सचेतना फैलाउने कार्य नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले गर्नुपर्ने भए पनि नगरिदा डेंगु फैलिने क्रम बढेको बताइएको छ ।
यसैगरी भुसुनाको टोकाइबाट हुने कालाज्वरका एक जना बिरामी पनि कञ्चनपुरमा फेला परेको छ । महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामीमा कालाज्वर भएको पाइएको हो । - रासस
10/27/2018 11:20:00 AM समाचार
कुश्मा, कात्तिक १० गते । ‘असला माछा’ पाइने खोला भनेर चिनिएको पर्वतको मोदी खोलामा अब भने असला माछा पाउन मुश्किल हुने भएको छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने अम्बोटमा असला माछा खानकै लागि लाम लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । मोदीका असला माछा भनेपछि टाढा टाढाबाट यात्रुहरु ओइरो लाग्थे । घण्टौं कुरेर पर्वतको सम्झना स्वरुप असला माछा लिएर पनि जान्थे कतिपयले । तर, अब मोदी खोलामा असला माछा त्यति सजिलै नपाइने भएको छ ।
त्यसैगरी, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्ने युनाइटेड मोदी–२ को क्षमता साढे १० मेगावाटको छ । निर्माणाधीन दुबै आयोजनाले आगामी दुई वर्षभित्र उत्पादन दिनेछन् । निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन सबै आयोजनाहरुको उत्पादन जोड्दा १२९ दशमलव ८ मेगावाट पुग्छ । - रासस
10/27/2018 11:10:00 AM मुख्य समाचार , समाचार
10/27/2018 11:06:00 AM समाचार
10/26/2018 12:01:00 PM स्वास्थ्य
पाइल्स, फिस्टुला र फिसर यी रोगहरुसँग प्रायः मानिसहरु परिचित हुन्छन्। किनकि धेरै मान्छेले आफू स्वयं, परिवारका सदस्य, साथीभाइ वा छर–छिमेकमा कोही न कोही यो रोगबाट आक्रान्त भएको देखेकै हुन्छन्। अझ सहरी परिवेश, अहितकर खानपान र अव्यवस्थित जीवनशैलीले यो रोग बढ्दो छ।
यी तीनवटै रोग मलद्वारसम्बन्धी रोग हुन्। हुन त धेरै मानिस यी सबैलाई पाइल्स भन्दै झुक्किरहेका पनि हुन्छन्। तर यी तीन रोगमा भिन्नता छ। आयुर्वेदमा पाइल्स वा हेमोरहोइडलाई अर्स, फिस्टुला–इन–एनोलाई भंगन्दर र फिसर–इन–एनोलाई परिकर्तिका भनिन्छ।
विभिन्न कारणले यी रोग हुने भए तापनि कब्जियत अर्थात् दिसा कडा हुनु नै यसका मुख्य कारण हुन्। रोग बल्झिने र निको नहुने कारण पनि यही हो। आम मानिसमा यी रोगसम्बन्धी व्यापक भ्रम, डर र जानकारीको कमी देखिन्छ। मानिसहरुले मलद्वारमा केही पनि समस्या हुँदा पाइल्स, क्यान्सर भयो भन्दै अस्पताल धाउँदै गरेका भेटिन्छन्।
मलद्वारभित्र र वरिपरि रक्तसिराहरु हुन्छन्। यी रक्तसिराहरु सुन्निने, मासु पलाएझैं ठूलो हुने समस्यालाई अर्स अर्थात् पाइल्स भनिन्छ। यो भित्री र बाहिरी गरी दुई प्रकारको हुन्छ। मलद्वारभित्र हुने अर्समा दिसा कडा हुँदा घाउ भई दुखाइरहित मलद्वारबाट रगत जाने हुन्छ। ठूलो हुदै जाँदा दिसा बस्दा त्यो मासु बाहिर आउने, सुरुसुरुमा आफैं भित्र जाने, पछिपछि औंलाले धकेल्नुपर्ने वा बाहिर नै बसीराख्ने पनि हुन्छ। बाहिरी अर्स-पाइल्स भने मलद्वार वरिपरिका सिराहरु सुन्निएर हुने गर्दछ।
भगन्दर अर्थात् फिस्टुला–इन–एनो भनेको दुई मुख भएको बाटो जस्तो हो, जसको भित्री मुख मलद्वार भित्र वा पक्वासयमा हुन्छ भने बाहिरी मुख मलद्वारको बाहिरी भागमा हुन्छ। पटकपटक संक्रमण भई बाहिरी मुखबाट पिप, रगत, दिसा आदि आउने हुन्छ। संक्रमण हुँदा अत्यन्त कष्टकर हुने र पिप निस्किसकेपछि केही दिन आराम हुने हुन्छ। तर पछि फेरि संक्रमण भई यो प्रक्रिया लगातार चलिरहने हुन्छ।
परिकर्तिका अर्थात् फिसर–इन–एनो भनेको दिसा कडा भई निस्किँदा मलद्वारको छाला च्यातिनु हो। यसमा अत्यन्त पीडा हुनुका साथै जलन, चिलाउने, दिसामा धर्को जस्तो रगत देखिने हुन्छ। यस्तो धेरै लामो समयसम्म भइरहँदा त्यहाँ मासु पनि पलाउने हुन्छ, जसलाई सेंटिनल टैग भनिन्छ।
नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धतिका रूपमा रहेको आयुर्वेद चिकित्सामा यी रोगहरुको अत्यन्त प्रभावकारी, सरल, सस्तो, भरपर्दो र उपद्रवरहित उपचार उपलब्ध छ। पेट सफा राख्ने, दिसा नरम, खुलस्त र नियमित बनाउने जड़ीबुटीयुक्त औषधिहरु एकदम प्रभावकारी र दुष्प्रभाव (साइडइफेक्ट) रहित छन्।
त्यस्तै स्नेहन, स्वेदन, लेप, विरेचन, वस्ति, घृत, लेप आदिको पनि प्रयोग गरिन्छ। आवश्यक परे शस्त्र कर्मअन्तर्गत क्षारसूत्र विधिको प्रयोग अर्स, भंगन्दर र परिकर्तिकाको सेंटिनल टैगमा गरिन्छ। रोगीलाई पूरै बेहोस गर्नु नपर्ने, घाउ कम हुने, कम दिन अस्पताल भर्ना भई बस्नुपर्ने, कम समयसम्म औषधि खानुपर्ने, फेरि बल्झिने वा रोग पुनः हुने अवस्था अत्यन्त न्यून हुने भएकाले आजकल यो विधि एकदम प्रचलित छ।
स्वस्थ मानिसलाई स्वस्थ राख्ने र रोगीको रोग समन गर्ने यी दुई मुख्य उद्देश्य रहेको आयुर्वेदमा हरेक रोगको उपचारमा कारण परित्याग प्रथम चिकित्सा सूत्र विधान रहेको छ। तसर्थ रोगको मुख्य कारणका रुपमा रहेको कब्जियत हटाउने उपाय गर्नुका साथै मलद्वारको सरसफाइमा विशेष ध्यानदिनु पर्छ।
विशेषगरी माछा, मासु, अण्डा, जाँडरक्सी, चुरोट, मर मसला, गुरु भोजनको अत्यधिक सेवनका कारण कब्जियत हुन सक्छ। त्यसैले कब्जियत गराउने यी खानेकुराका साथै मरिच, अदुवा, खुर्सानी, चिल्लो पिरो, मैदा परिकारहरु जस्तै मम, चाउमिन, बिस्कुट, दही, केरा, पिंडालु, अनार, चिउरा, कालो दाल, सुपारी, पान, बाहिरी खानेकुरा, तैलीय पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, चिया कफी आदिको सेवन नगर्ने वा गर्नै परे एकदम कम मात्रामा गर्नुपर्छ।
त्यस्तै प्रशस्त पानी, झोलपदार्थ, हरियो सागपात, सलाद (काँक्रो, मुला, गाजर आदि), आटाको रोटी, रहर, मुँगको दाल, तररहित दूध, फलफूल आदि सेवन गर्नुपर्छ। कदाचित कब्जियत भइहाले त्रिफला चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, त्रिवृत्त चूर्ण, अभयारिस्ट आदि औषधिको प्रयोग अल्प समयसम्म गर्न सकिन्छ। केही समस्या भए चिकित्सकलाई देखाई अरु औषधि–उपचार गराउनुपर्छ। - स्वास्थ्यखबर पत्रिकाबाट
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुरमा इन्टर्न डाक्टरका रुपमा कार्यरत छन्)
10/26/2018 11:47:00 AM स्वास्थ्य
लेखक राजेशकुमार दास
मेमोग्राम भन्दा पहिले
मेमोग्रामद्वारा लिएको तस्वीरले तपार्इंको स्तनमा भएको गाँठागुठी अथवा क्याल्सियमलाई खोज्न मद्दत गर्दछ । अधिकतम गाँठागुठी क्यान्सरको संकेत दिँदैन । यहाँ बीआई–आरएडीएस अथवा ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिङ्ग र डाटाबेस सिस्टम नामक मेमोग्राम एक राष्ट्रिय निदान प्रणाली हो । यस प्रणालीमा सात श्रेणी हुन्छन् जहाँ शुन्यबाट ६ श्रेणीसम्म हुन्छन् । प्रत्येक श्रेणीमा यो बताइन्छ कि के स्तनको अतिरिक्त तस्वीर आवश्यक छ कि छैन अथवा स्तनको कुनै पनि क्षेत्र क्यान्सर मुक्त छ अथवा क्यान्सर युक्त हुने सम्भावना छ।
(दास त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा रेडियोलोजी अध्ययनरत छन् ।) - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
10/26/2018 11:40:00 AM खेलकुद
काठमाडौँ, कात्तिक ९ गते । एएफसी यु–१९ फुटबल च्याम्पियनसिप छनोटमा नेपालले आज आफ्नो दोस्रो खेलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
थाइल्याण्डको चोनबुरी रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयानुसार दिउँसो २ः४५ बजे शुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ ९एन्फा०ले जनाएको छ । प्रतियोगितामा अङ्कबिहीन नेपाललाई अघिल्लो चरण पुग्न आजको खेलमा भारतलाई हराउनुपर्ने दबाब छ ।
नेपाल आफ्नो पहिलो खेल कात्तिक ७ गते थाइल्याण्डसँग ३–० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो । भारतले भने पाहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई १८–० गोल अन्तरले हराएको थियो ।
कात्तिक ११ गतेसम्म सञ्चालन हुने छनोट प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘बी’ मा परेको छ । नेपालको समूहमा भारत, पाकिस्तान र थाइल्याण्ड छन् । प्रतियोगितामा एक÷एक खेल जितेको भारत र थाइल्याण्डसँग तीन÷तीन अङ्क छ भने नेपाल र पाकिस्तान अङक्विहीन छन् ।
नेपालले समूहचरणको अन्तिम खेल कात्तिक ११ गते पाकिस्तानसँग भिड्नेछ । पहिलो चरणको छनोटबाट शीर्ष दुई टोलीले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन् । नेपाली टोली कात्तिक ३ गते त्यसतर्फ गएको हो ।
पहिलो खेलमा पाकिस्तानविरुद्ध फराकिलो जित निकालेको भारत उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रदैछ भने पहिलो खेलमा पराजित नेपाल केही दबाबमा हुनेछ । - रासस
10/26/2018 11:32:00 AM राजनीति
मुडेमा हिल स्टेशन बन्ने
10/26/2018 11:25:00 AM समाचार
मेलम्ची, कात्तिक ९ गते । सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका–५ मुडेमा बन्न लागेको हिल स्टेशनबारे प्रदेश नं ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
मन्त्री नेपालले मुडेबजार पर्यटन, जडीबुटी र कृषिमा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले बजेटको प्रशस्त व्यवस्था गरिएको र उक्त बजेटको स्थानीयले युवाको अग्रसरतामा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । - रासस
10/26/2018 11:20:00 AM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौँ, कात्तिक ९ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इन्डिया फाउण्डेशनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा भाग लिन आज भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ ।
उहाँको बिदाइका लागि महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू अग्नि सापकोटा, दीनानाथ शर्मालगायत विमानस्थल पुग्नुभएको थियो । उहाँ आजै बेलुका स्वदेश फर्कनुहुनेछ । - रासस
10/25/2018 11:45:00 AM स्वास्थ्य
मेडिकल क्षेत्रमा भिडियो एक्स-रे को प्रयोग हुनथालेको करिब ६ दशक भइसकेको छ ! नेपालमा पनि यसको प्रयोग प्राय: सबै सानोठूलो अस्पतालमा हुन्छ । एउटा रेडियोलोजिस्टले भिडियो एक्स-रे गर्दा दैनिक जसो कानमा पर्ने प्रश्नमध्ये एउटा हो 'डाक्टर साहब, यो भिडियो एक्स-रे कति पटक गर्ने हो ? अस्ति भर्खर गरेको फेरी गर्दा बचालाई केहि असर पर्ने हो कि ?'
भिडियो एक्स-रे गर्भावस्थामा कम्तिमा १ पटक (भिडियो एक्स-रे को पहुँच नभएको वा अरु कुनै कठिनाई भएकोमा ) देखि ३ पटकसम्म गरिन्छ। पहिलोपटक पहिलो त्रैमासिक अर्थात् १२ हप्ता सम्म गर्भको दिन / समय तोक्न, मुटुको धड्कन र बच्चा बस्नेघर पाठेघरमा भए नभएको हेर्न । दोस्रोपटक दोस्रो त्रैमासिकमा बच्चाको अवस्था थाहा पाउन ( अंगभंग भएको वा राम्रोसँग बनेको वा नबनेको हेर्ने ) । दोस्रो त्रैमासिकको जाँच एकदमै महत्वपूर्ण र अनिवार्य हो । अरु समयको स्क्यान भए वा नभए पनि दोस्रो त्रैमासिकमा हुन अति आवश्यक छ । तेस्रो त्रैमासिकमा बच्चाको अवस्था, साल र पमनीको अवस्था हेर्न गरिन्छ । यी उल्लेखित कारण वा समय भन्दा अरु कारण र समयमा पनि भिडियो एक्स-रे गरिन्छ र गर्नु परेमा सुत्केरीलाइ हेर्ने गाइनेक्लोजिस्ट र रेडियोलोजिस्टको सल्लाह अनुरुप गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया भिडियो एक्स-रेले मानव सरिरलै खासै हानी पुर्यासउने गरेको पाइएको छैन। अहिलेसम्म थाहा भएको मध्ये प्रमुख नकारात्मक प्रभाव कोसिकाहरु तात्तिनु हो तर २.५ डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि भए मात्र हानी हुन्छ, त्यसभन्दा कम भएमा खासै नकारात्मक असर हुँदैन ! प्राय डायग्नोसटिक भिडियो एक्स-रे गर्दा अधिकतम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड(<२.५ ) सम्म तापमान बढ्ने रिसर्चमा उल्लेखित छ । तापमान बढाउने अर्को भिन्न भिडियो एक्स–रे गर्दा लाग्ने समय हो। जति लामो समय त्यत्तिनै तापक्रम बढ्छ। कति समयसम्म गर्दा कतिसम्म तापक्रम बढ्छ भन्ने कुरा मेसिनको थर्मल इन्डेक्स (टीआर्इ) बाट थाहा हुन्छ । यही टीआइबाट कति समयसम्म भिडियो एक्स-रे गर्दा हानी हुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ। यो फरक–फरक मेसिनको फरक फरक हुने गर्छ तर विदेशका ठूला अस्पतालहरुमा गरिएको अनुसन्धान अनुसार अहिले प्रयोगमा आइरहेका मेसिनहरुले हानिकारक मात्रामा बढाउँदैनन्।
निस्कर्षमा, भिडियो एक्स-रे प्रयोग भएको यति लामो समयमा मानव शरीरलाई नकारात्मक असर पुर्याउने कुनै ठोस प्रमाण थाहा भएको छैन। युएसजी धेरैपटक गरेर गर्भावस्थाको प्रतिफल राम्रो हुने र कम गरेर नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन। आमा र गर्भमा रहेको शिशुको स्वास्थ्यमा भिडियो एक्स-रेबाट पत्ता लाग्ने कुनै प्रकारको समस्या छैन भनेर यकिन गर्न, गर्भको प्रतिफल राम्रो हुनका लागि, शिशुलार्इ हानी नहुने गरी वा सकेसम्म कम हुनेगरी विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह बमोजिन भिडियो एक्स-रे को प्रयोग गर्नु पर्दछ।- डा आवेश कोइराला, रेडियोलोजिस्ट ,स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
10/25/2018 11:33:00 AM मुख्य समाचार , समाचार
सिंहदरबारमै बन्ने भयो संसद् भवन
10/25/2018 11:20:00 AM मुख्य समाचार , राजनीति
काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । लामो समयको विवादपछि सङ्घीय संसद्को भवन सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा नै बन्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत निर्देशनमा सहरी विकास मन्त्रालयले पुतली बैगौँचामा नै भवन निर्माण गर्नेगरी भवनको डिजाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने जनाएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा अहिले सङ्घीय संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर बैठक चलाइरहेको छ । तीन वर्षसम्म भवन निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पुतली बगैँचाको सट्टा सेनालाई गृह मन्त्रालय पछाडि रहेको खाली जग्गा शोधभर्ना गर्नेगरी भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । त्यससका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा संसद् तथा सेनाका समेत प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिएको छ । भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चालु वर्षको बजेटमा ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्योल टुङ्गिएको बताउनुभयो । राईले भन्नुभयो, ‘भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्योल टुङ्गिएको छ । कहाँ बनाउने भनेर जग्गा खोजी भइरहेको थियो अब पुतली बगैँचामा नै बन्ने निश्चित भएको छ । छोटो समयमा निर्माण सक्नुपर्ने भएकाले कुन ‘मोडालिटी’बाट ठेक्का दिने भन्नेमा परामर्शमा छौँ । चालु वर्षभित्र भवन निर्माणको बोलपत्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।’
हालसम्मको तयारी अनुसार पुतली बगैँचामा ‘अन्डरग्राउन्ड’सहित पहिलो र दोस्रो तला पार्किङका लागि प्रयोग गर्नेगरी भवन निर्माणको तयारी छ । भवनमा सिंहदरबार परिसर बाहेकबाट पनि प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । भवनको कुल लागत भने मन्त्रालयले यकिन भइसकेको छैन ।
विसं. २०५५ सालदेखि नै पुतली बगैँचामा संसद् भवन बनाउने भनिए पनि सेनाले जग्गा छाड्न तयार नभएपछि लामो समय अन्योल कायमै थियो । संसद् र सेनाबीच जग्गाबारे पटक पटक औपचारिक पत्राचार भए पनि निष्कर्ष निस्किएको थिएन । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय पछाडिको जग्गा लिएर संसद्लाई जग्गा छाड्न भने सेना सकारात्मक थियो ।
आफ्नै भवन नहुँदा अहिले संसद्का बैठकहरू बानेश्नरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर चलाइँदै आएको छ । सिंहदरबारस्थित संसद्को ग्यालरी हल सानो भएपछि पहिलो संविधानसभामा सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिई संविधानसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
ठूलो आकारमा संविधानसभा बनेपछि उक्त ग्यालरी बैठकमा लबी र आवश्यक आसन कक्ष सानो भएको थियो । २०६५ सालदेखि संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडावापत नै झन्डै एक अर्ब रुपियाँ तिरिसकेको छ ।
सचिवालयले अहिले केन्द्रलाई वार्षिक करिब १० करोड रुपियाँ भाडा तिर्दै आएको छ । हाल सम्मेलन केन्द्रको सम्पूर्ण परिसर समेत उपयोग गर्नेगरी वार्षिक १५ करोडको भाडा सम्झौता भएको छ । तर, सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समितिले परिसरमा रहेका सबै कार्यालय हटाइसकेको छैन । उक्त परिसर समेत खाली भएपछि सचिवालयले वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ ।
‘मन्त्री निवासमा विदेशी पाहुना’
मन्त्रालयले संसद् भवनसँगै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास दिनेगरी भवन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि अघि बढाएको छ । आवास निर्माणका लागि भैँसेपाटीमा रहेको जग्गा उपयोग गर्ने निर्णय भइसकेको छ । प्रत्येक प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दुई÷दुई रोपनीमा फैलिएको आवास निर्माणको योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको हो ।
‘समन्वय परिषदको बैठक लगायतमा आउदा बस्नेगरी प्रादेशिक गेष्ट हाउसको परिकल्पना गरिएको हो । प्रदेश प्रमुखसँगै मन्त्री निवास पनि भैँसेपाटीमा नै सार्ने योजना छ । प्रतिनिधिसभा सभामुख -उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष -उपाध्यक्षको निवास पनि त्यहीँ बनाउने योजना छ’ मन्त्री राईले भन्नुयो । उक्त जग्गा १२३ रोपनी रहेको छ ।
मन्त्रालयको योजना अनुसार हाल कायम रहेको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा भने विदेशी विशिष्ट पाहुनाका लागि अतिथि सत्कार तथा आवासका रूपमा प्रयोग गर्नेगरी नयाँ भवन बनाइनेछ । ‘स्टेट गेष्ट हाउस’का रुपमा भवन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । - नारायण काफ्ले , गोरखापत्र दैनिकबाट
10/25/2018 11:16:00 AM समाचार
सुरुङ्गा, कात्तिक ८ गते । अपराध नियन्त्रणका लागि १२ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै झापाका १५ स्थानीय तहले आगामी माघ १ गतेदेखि झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । जसका लागि जिल्लाका सात नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बुधबार १२ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
कनकाई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा झापा जिल्लाको अपराधको स्थिति र यसका प्रमुख कारणको विषयमा प्रकाश पार्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जिल्लामा प्रत्येक वर्ष मदिरा सेवनका कारण आपराधिक घटना वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभएको छ । ढकालद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा एक हजार ६८७ मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक हजार ४०० र आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा एक हजार १९७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको तीन महीनामै ३७६ मुद्दा दर्ता भएको ढकालद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । - गोरखापत्र दैनिकबाट
10/25/2018 11:12:00 AM खेलकुद
काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा आगामी वर्ष संयुक्तरूपमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ९आइसिसी० विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी शुक्रबार नेपाल ल्याइँदैछ ।
आइसिसीकी नेपाल प्रतिनिधि एवं क्यानकी पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेका अनुसार विश्वकप ट्रफी बङ्गलादेशबाट शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने छ । ट्रफी नेपालमा चार दिन राखिनेछ । नेपालमा रहँदा ट्रफीलाई स्वयम्भू, पोखरा र चन्द्रगिरिमा पुरयाइनेछ ।
पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट ९पिपिएल०का लागि सबै खेलाडी र क्रिकेटसम्बद्ध व्यक्ति पोखरामा रहेकाले ट्रफी पोखरा लैजान लागिएको हो ।
त्यस्तै २८ गते आइतबार ट्रफीलाई काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा लगेर प्रर्दशनीमा राखिनेछ । सोही दिन प्रधानमन्त्री र सर्वसाधारणलाई समेत ट्रफी देखाइने कार्यतालिका रहेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
ट्रफी नेपालबाट भारत, न्यूजिल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, केन्या, रुवान्डा, नाइजेरिया, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड र जर्मनी हुँदै इङ्ग्ल्यान्ड लगिनेछ । विश्वकप ट्रफी नेपालसहित २१ देशका ६० शहरमा प्रदर्शन गरिने आइसिसीले जनाएको छ । - रासस
10/25/2018 11:05:00 AM समाचार
नेकपा सचिवालय बैठक आज एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा
10/25/2018 11:02:00 AM मुख्य समाचार , राजनीति
काठमाडौंँ, कात्तिक ८ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बुधबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय सचिवालय बैठक तयारी नपुगेको भन्दै बिहीबार बिहानका लागि सारिएको छ । बैठकमा पार्टीको तल्लो निकायसम्मको एकता प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनेगरी गृहकार्य अन्तिमचरणमा पुगेको भन्दै नेताहरूकै प्रस्तावमा बैठक सारिएको जानकारी दिइएको छ ।
प्रदेश, जिल्ला तथा अन्य कमिटीहरूको एकता प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी बैठकमा गरिएकाले त्यसको अन्तिम गृहकार्य भइरहेकाले बैठक बिहीबारसम्मका लागि सारिएको एक सदस्यले बताउनुभयो । बैठक बिहीबार ११ बजेका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको छ ।
यसअघिको सचिवालय बैठकले प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज तथा जिल्ला नेतृत्वका बारेमा निर्णय गरेको भए पनि बाँकी भ्रातृ सङ्गठनको एकता प्रक्रियाका विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जको निर्णयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमतिसहितको लिखित प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो । तर प्रस्तावका बारेमा निर्णय गर्नु नपर्ने भन्दै सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाएको थियो ।
पार्टी एकता घोषणा भएको पाँच महिना पूरा हुँदासमेत जनवर्गीय तथा अन्य भ्रातृ सङ्गठनको एकता प्रक्रियाले अन्तिमरुप लिन नसक्दा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता तहबाटै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ । पार्टीका तल्लो तहको एकता प्रक्रियाको गृहकार्य अन्तिमचरणमा पुगेकोले एकदिनका लागि बैठक सारिएको सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाकाअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार अन्य कार्यक्रममा व्यस्त रहनु भएपछि बैठक बिहीबारका लागि सारिएको हो । पार्टी एकताको अन्य प्रक्रियाको गृहकार्य पनि सँगसँगै भइरहेकाले सम्बद्ध पक्षलाई विचार गर्दै बैठक एक दिनका लागि सारिएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
चियापानको तयारी पूरा
पार्टी एकतापछि पहिलो पटक शनिबार हुनलागेको चियापान कार्यक्रमको सबै तयारी करिब पूरा भएको नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । तयारीका बारेमा बुधबार पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई सहितका केही नेताहरुले चियापान हुने स्थान भृकुटीमण्डपको निरीक्षण समेत गर्नुभएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्बत तथा छठको अवसरमा आयोजना हुन लागेको चियापान कार्यक्रमका लागि करिब ५० हजार जनालाई निमन्त्रणा वितरण गरिएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार १० गते मध्याह्न १२ देखि ५ बजेसम्म चियापानको कार्यक्रम तय भएको छ ।
३ बजेसम्म पार्टी नेता, कार्यकता तथा सर्वसाधारणका लागि र ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखलगायत लाई आमन्त्रण गरिएको श्रेष्ठले बताउनुयभयो ।
तीनसय बढी स्वयम्सेवक परिचालन गरिने चियापान कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो । चियापानमा करिब ४० हजारको सहभागिता रहने पार्टाीको विश्वास रहेको नेता श्रेष्ठले सुनाउनुभयो । चियापानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ ।- गोरखापत्र समाचारदाता , गोरखापत्र दैनिकबाट
काठमाडौंका सडकमा साझाका ५ विद्युत्तीय बस
10/23/2018 11:30:00 AM समाचार
सिट क्षमता २०, सीसीटीभीले गर्नेछ यात्रुको निगरानी
काठमाडौं , कार्तिक ६ गते । साझा यातायात प्रालिले काठमाडाैंमा विद्युत्तीय बस सेवा शुरू गरेको छ ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित हरिहर भवनमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान विद्युत्तीय बस सेवा सञ्चालनको उद्घाटन गरेका हुन् ।उपत्यकाको बढ्दो प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ५ वटा विद्युत्तीय बस सञ्चालनमा ल्याएको साझा प्रालिले जनाएको छ ।
विद्युत्तीय बसहरु चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका हुन् । साझाको व्यवस्थापनमा रहने ती बसहरु खरिदका लागि एडीबीले सहयोग गरेको साझा यातायातका निमित्त कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
चालकसहित २० सिटको क्षमताका ती बसहरुमा सीसी क्यामेरा लडान गरिएका छन् । - अनलाइन खबरबाट
चीनले समुद्रमा बनायो विश्वकै लामो पुल
10/23/2018 11:22:00 AM विश्व
काठमाडौं कार्तिक ६ गते । चीनले समुद्रमा विश्वकै लामो पुल बनाएको छ । हङकङ, झुहाई-मकाउ नामको यो पुलको लम्बाइ ५५ किलोमिटर छ । चिनियाँ राष्टपति शी जिनपिङले मंगलबार उदघाटन गरेको यो पुललाई बुधबारबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने छ ।
हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झुझाई पुग्न करिब चार घण्टा यात्रा गर्नुपर्छ, तर अब यो पुलले चार घण्टाको दुरीलाई केबल ४५ मिनेटमा छोट्टाइदिएको छ । यस पुलबाट हरेक दिन करिब ४० हजार गाडी आवत-जावत गर्ने अनुमान छ ।
यो पुल बनाउन १२० अर्ब युआन खर्च भएको छ । यो खर्च हङकङ, मकाउ र झुझाइले बेहोर्ने छन् । यस परियोजनाको कन्सेप्ट सन् २००३ मा आएको थियो, तर सन् २००९ मा निर्माण शुरु गरिएको थियो । यो पुलबाट तीनवटै शहर केबल एक घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यसबाट आर्थिक विकासमा पनि मद्दत पुग्ने अनुमान छ ।
हङकङ-झुहाई-मकाउ पुल प्राधिकरणका सहनिर्देशक यू लीका अनुसार पुल निर्माणमा करिब १४ हजार मजदुरहरुलाई खटाइएको थियो । यसबाहेक सामान ओसारपसार गर्न समुद्रमा ३०० जहाज परिचालन भइरहे ।
समुद्रभित्र पनि पुल
यो पुललाई यस्तो किसिमले बनाइएको छ कि मकाउ-हङकङ र झुझाईको यातायात बिना कुनै रोकावट चलिरहने छ । छ लेनको यो पुलमा चार वटा सुरुङसमेत बनाइएको छ ।
पुल निर्माणको क्रममा यसको एउटा हिस्सा हङकङको व्यस्त एयरपोर्ट भएको मार्गसँग पनि जोडिएको थियो । यसैलाई ध्यानमा राखेर इन्जिनियर र कामदारहरुले पुलको करिब ६ दशमलव ७ किलोमिटर लामो हिस्सामा ३०-४० मिटरभित्र गहिराइमा रहेर काम गरे ।
हङक र मकाउ दुवै सन् १९९० देखि चीनको नियन्त्रणमा छन् । यी दुवै ‘एक देश, दुई प्रणाली’को सिद्धान्तमा चल्दै आएका छन् जसले उनीहरुलाई ५० वर्षसम्म चीनबाट स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो सरकारी तन्त्र चलाउने अनुमति छ । - अनलाइन खबरबाट
विश्वमा घुम्नलायक उत्कृष्ट शहरमा काठमाडौं पनि
10/23/2018 11:13:00 AM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौं , कार्तिक ६ गते । सन् २०१९ मा घुम्नलायक विश्वका उत्कृष्ट शहरहरुको सूचीमा काठमाडौं पाँचौ स्थानमा परेको छ । लोन्ली प्लानेटले निकालेको १० उत्कृष्ट शहरहरुको सूचीमा काठमाडौंले मेक्सिकोसिटी, सेनेगल, वाशिङ्गटन, क्रोयसिया र मोरक्कोलाई समेत पछि पारेको छ ।
10/23/2018 11:08:00 AM स्वास्थ्य
त्यो पनि शरीरमा आयोडिनको कमी छ वा गलगाँडको समस्या छ भने मात्र थाइराइडको समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले त्यस्तो खानेकुरा नखान सल्लाह दिइने हो । तर बन्दा, काउली खाँदैमा थाइराइड हुन्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन । - अनलाइन खबरबाट